Wada sheekaysiga fiidiyowga ah ee Ingiriisiga
Wada sheekaysiga fiidiyowga ah ee Ingiriisiga.
Maanta dad badani way ogyihiin suurtagalnimada wada sheekaysiga fiidiyowga ruushka. Xitaa dad badani waxay isku dayaan inay marin u helaan agabkan ugu yaraan hal mar maalintii si ay si xor ah ula hadlaan dadka kale: magaalooyinka kale, waddamada iyo qaaradaha. Ku sheekaysiga fiidiyowga ee Ruushku waa ku habboon yahay maxaa yeelay qof walba wuxuu ku hadlaa luuqadda Ruushka badnaantiisa. Haddii kale, ma jiraan wax xayiraad ah.
Dhawaan, wada sheekaysiga fiidiyowga ee Ruushka ee Ruushka ayaa sii kordhaya oo aad u caan ah. Marka waa waqtigii looga hadli lahaa akhlaaqda ku jirta sheekaynta fiidiyowga Ruushka. Su’aashani waxay walwal badan gelisaa shabakadaha. Qodobkaani wuxuu ka hadlayaa arrimaha soo socda:
xun waa akhlaaqiyaadka ku jira sheekaysiga fiidiyowga "Ruushka roulette"
maxaad ugu baahan tahay inaad raacdo anshax marka lagu hadlayo sheekada fiidiyaha
nooc oo anshaxeed oo ku jira fiidiyowga sheekaysiga ee ruushka Ruushka
xeerarka aasaasiga ah ee dabeecadda ee ku saabsan sheekaysiga fiidiyowga ruushka roulette
how noqo si aad u noqoto qof wada sheekeyste ah oo ku jira fiidiyowga sheekaysiga ruushka
A hadda aan si kooban u dul dhigno dhammaan qodobbada akhlaaqda ee ku jira sheekaysiga fiidiyowga Ruushka ee ruushka. Aan ku bilowno su’aasha koowaad:
Muxuu yahay akhlaaq xaraashka fiidiyowga ku sheekaysiga ee Ruushka?
Qof walba wuu ogyahay in akhlaaqdarradu ay tahay qaanuun anshaxeed xaaladaha qaarkood iyo meelaha qaarkood. Waxay noqon doontaa isku mid internetka. Akhbaarta internetka iyo sheekaysiga fiidiyowgu waa qaanuunka anshaxa, iyo sidoo kale muuqaalka, dhaqanka, laakiin mar hore ayaa khadka tooska ah laga geliyaa. Asluubta internetka ma aha mid aad uga duwan akhlaaqda fudud. Laakiin wali farqi ayaa u dhexeeya. Taasi waa waxa aan ka wada hadli doonno inta lagu gudajiro doodaha akhlaaqda ku saabsan sheekaysiga fiidiyowga Ruushka. Dad aad u tiro badan ayaa doonaya inay saaxiibo cusub sameystaan, ama xitaa saaxiibo, internetka. Wada sheekaysiga fiidiyowga ayaa sida ugu fiican u habboon tan.
Maanta, qof walba wuu tagi karaa sheeko fiidiyoow ah oo wuxuu heli karaa qof uu la hadlo. Wada sheekaysiga fiidiyowga fiidiyowga ah wuxuu ka duwan yahay sheekada fiidiyowga fudud ee muuqaalada qaarkood:
interlocutor wuxuu bixiyay gebi ahaanba random
Waad joojin kartaa wadahadal waqti kasta oo aad bilaabi kartaa inaad dadka kale la sheekaysatid.
uma baahna isdiiwaangalin si ay u bilaabaan wada hadalka
Waad kula hadli kartaa dhowr qof hal fadhi.
Waa astaamahan qeexaya xeerarka asluubta inta lagu gudajiro isgaarsiinta qadka sheekaysiga fiidiyowga. Gaar ahaan ciyaarta ku sheekaysiga fiidiyowga ee Ruushka. Xeerarka anshaxa inta lagu jiro wadahadalka khadka tooska ah waa mid fudud oo qof walba fahmi karo. Si kastaba ha noqotee, waxaa mudan in wax laga ogaado iyaga guuldarrooyin. Markiiba sida ugu dhaqsaha badan ee aad u barato sharciyadan, ayaa nasiyo iyo farxad kuu leh wada hadalka lala yeelanayo dadka kale ee dhex jooga. Faa'iidooyinka badan ee aad heli doontid adiga oo ah xiriiriyaha.Tani waxay mar horeba noqon kartaa tilmaame anshax xumo. Iyo ka soo horjeedda, haddii qawaaniinta habdhaqanka shabakadda ee ku saabsan sheekaysiga fiidiyowga ruushka lagu xushmeeyo, markaa xiriiriyaha wada-shaqeynta leh faraxsanaanta ayaa kugula talinaya oo kuu soo jeedin doona inaad kula kulanto kulamada khadka tooska ah. Tani waa runtaha fudud: haddii aad dhawrto anshax, markaa xiriirku wuxuu farxad weyn ka keeni doonaa geedi socodka laftiisa. Qofka qof kale jeclaado inuu noqdo xiriiriyaha waxay u badan tahay inuu sameysto saaxiibo ama saaxiibo cusub. Ama kaliya la sheekayso madadaalo.
Haddii aad daawato anshaxeed ku saabsan ku sheekaysiga fiidiyowga fiidiyowga, ka dibna waxaad si fudud uga heli kartaa faa iidooyin badan xiriiriyaha kale. Sidoo kale waa macquul in la sifeeyo murashaxiinta aan u qalmin ee isgaadhsiinta waqti yar oo caddaalad ah. Maaha wax qarsoodi ah in dhexdhexaadiyayaashu ay baaraan cabashooyinka oo ay mamnuucaan saacadaha oo dhan, ama xitaa dadka fiican ee aan u dhaqmin sida sharcigu qabo. Haddii aadan daawayn akhlaaqda la aqbalay ee ku saabsan barnaamijka sheekaysiga fiidiyowga ee fiidiyowga, ka dib way qori karaan dacwad adiga kugu saabsan markaa kiiskan waxaa jiri kara suuragalnimo sare in laga mamnuuco in muddo ah. Haddii cabashooyinka marar badan la helo, markaa suurtagalnimada dhabta ah ee xannibaadda ayaa waligeed jiri doonta.
Tani waxay noqon kartaa mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn iyo jawaabaha su'aasha: Maxay tahay sababta fiidiyoowga fiidiyoowga loogu daawado akhlaaqda?
Tani, dabcan, waa jawaabtu, laakiin maahan tan keliya. Mamnuucista ka sokow, waxaa jira cilado kale haddii anshax xumo la ixtiraamo. Tusaale ahaan, xaalad ayaa dhici karta markii aad runtii jeceshahay qofka aad la hadlaysid aadna jeclaan lahayd inaad sii waddo la hadalka isaga, laakiin ma ogi sida loo sameeyo tan. Tani waxay sidoo kale noqon doontaa astaamaha akhlaaqda. Dhamaan akhlaaqda waa qawaaniinta wada xiriirka. Iyo in la ogaado sida loogu daro qol shaqsiyeedka wada xiriirka sidoo kale waxay qeyb ka noqon kartaa akhlaaqda.
Haddii dhex-dhexaadiyuhu uu xishoodaan oo uu aamusnaado muddo aad u dheer, markaa isaguna wuxuu ku xadgudbayaa qawaaniinta akhlaaqda. Ka dib oo dhan, wada xiriir kasta wuxuu ku lug leeyahay ficillo isweydaarsan Sidaa darteed, waxay noqon doontaa wax layaab leh haddii mid had iyo jeer hadlo, midka kalena si joogto ah u aamusi doono.
Waa dhawrista asluubta ka dhigaysa ku sheekaysiga fiidiyowga ruushka Ruushka sheekaysiga raaxada iyo faa'iidada leh.
Noocyada anshax-marinta ee fiidiyaha fiidiyowga ku hadla Ruushka
Qaabka loo yaqaan '
Etiquette' wuu kala duwanaan karaa. Inta badan akhlaaqda waa loo qeybin karaa:
Noocyada akhlaaqda ah waxaa loo tixgelin karaa inay yihiin kuwa ugu muhiimsan marka la xiriirayo wada sheekaysiga fiidiyowga ee Ruushka ku hadla. Aynu eegno oo si faahfaahsan u falanqeyno nooc kasta oo akhlaaq leh.
Akhlaaqda dharka ayaa macnaheedu yahay inaad dharka gashato inta lagu gudajiro wada hadalka internetka. Ugu yaraan ixtiraamka meeshiisa. Gabdhaha iyo haweenku ma aha inay muujiyaan naasaha qaawan iyo qaybaha kale ee jirkooda oo dareenkooda galmo ka bixi doona sinaba.
Nin ayaa sidoo kale ka wanaagsan inuu labbisto.Taas macnaheedu waa in labada isweydaarsiga ay waajib tahay inay labistaan ​​inta ay ku sheekaysanayaan luqadda Ruushka.
Haddii aan ka hadalno akhlaaqda qurxinta, ka dib wax walba way ka sahlan yihiin. Haddii aad isku qurxiso qurxiyo aad u dhalaalaya, isla markiiba waxay iska riixi kartaa xiriiriyaha suurtagalka ah. Ama waxaa laga yaabaa inay soo jiitaan. Weligaa ma ogaan kartid hubaal. Sidaa darteed, habluhu way ku fiican yihiin inay diiradda saaraan shucuurtooda. Haddii aad ku qanacsantahay qurxiyo qurxin, waad sameyn kartaa. Haddii raaxo la’aan tahay qurxiyo la'aan, markaa ma sameyn kartid gabi ahaanba.
Laakiin wali waa mudan tahay in la xasuusto in "ay ku soo gaadhaan dharka, laakiin maskaxda ku haya." Ilbidhiqyada ugu horreeya ayaa ah kuwa ugu muhiimsan marka la raadinayo xiriiriyaha. Ilbidhiqyada ugu horreeyaana waxaa laguugu xukumay si sax ah muuqaalka. Sidaa darteed, si taxaddar leh uga fikir waxa aad xiran doontid iyo sida loo xirxiro qurxiyo. Oo ha iloobin timaha. Ugu yaraan shanlo ma faragaliso.
Hadaad dhawrto anshaxa noocyadan: akhlaaqda dharka, dhaqanka iyo qurxinta, markaa kuwada sheekaysiga fiidiyowga sheekaysiga fiidiyowgu wuxuu yeelan doonaa miro: waxaad kahelaysaa is dhex galka wanaagsan iyo wada xidhiidhka ayaa noqon doona mid aan ilaawi doonin.
Xeerarka aasaasiga ah ee ku sheekaynta fiidiyowga ruushka Ruushka
Dadka waxay aadaan wada sheekaysiga fiidiyowga si ay ula sheekaystaan ​​oo ay waxoogaa yar u nastaan ​​shaqada maalin adag kadib. Isla sheekaysiga fiidiyowga, roulette Ruush wuxuu kula kulmi karaa dad ka kala yimid wadamo kala duwan, magaalooyin, xaalado bulsho oo kaladuwan iyo heerar dakhli oo kala duwan. Dhammaan waxaas oo dhami waxay kuu oggolaanayaan inaad si xor ah u wada hadashid isla mar ahaantaana aad u hesho caadifado badan oo wacan.
Run, waxaas oo dhami waxay suurtogal u yihiin oo keliya iyada oo la raacayo xeerar adag oo dabeecadeed oo ku saabsan isweydaarsiga fiidiyowga fiidiyowga. Xeerarka akhlaaqda sidoo kale waxaa lagu soo daray akhlaaqda. U fiirsashadooda waxay ka dhigan tahay inaad tahay qof wada sheekeysi wanaagsan oo xushmeeya dareenkiisa isla markaana ixtiraama lammaanaha wada-xiriirka.
Hadana bal aan eegno dhammaan shuruucda isgaarsiinta marka la eego anshaxa.
Waa kuwan shuruucda aasaasiga u ah wada xiriirka ku saabsan sheekaysiga fiidiyowga ee Ruushka ku hadla:
noqo mid akhlaaq leh
Ixtiraam dareenka isdhaxgalka
Ixtiraam naftaada iyo dareenkaaga.
dooro dhex dhexaadin danaha
sii wad wadahadalka
jooji isgaarsiinta aan loo baahnayn oo khatarta ah
Kuwani waa xeerarka, haddii lagu muujiyo luqadda akhlaaqda. Hadda aan eegno qawaaniin isku mid ah marka loo eego ka sheekaynta fiidiyowga ruushka Ruushka. Taasi waa waxa ay dhahaan:
Lama caadin karo mana adeegsan kartid ereyada dhaarta
qofna ma caayayo sabab kasta ha noqotee: jinsi, da ', midabka maqaarka, caqiidada diinta, aragtida siyaasadeed.
galmada uma adeegsan kartid isgaarsiinta
kama muuqan kartid qolka qaawan
Ma muujin kartid walxo kale halkii aad naftaada iyo wajigaaga iskaga muujin lahayd.
Kuwani waa xeerarka aasaasiga ah. Haddii si adag loo fiirsado, isgaarsiinta, waxaan ku celinayaa mar kale, waxay soo bixi doontaa oo keliya natiijooyin wanaagsan.Falanqeeyayaasha fiidiyowga wada sheekaysiga ee firaaqada ee Ruushka waxay qaataan maalin iyo habeen, iyagoo kala soocaya cabashooyinka. Had iyo jeerna kuwa dadka soo booqda ee fiidiyowga fiidiyowga ah ee Ruushka u hadla ee ku xadgudba ugu yaraan mid ka mid ah xeerarka ayaa la mamnuucay. Run, weligood ma mamnuucaan, laakiin wakhti cayiman. Laakiin haddii qaladku weyn yahay ama aad u culus yahay, markaa waa la mamnuucikarayaa weligood. Tani waxay la macno tahay inaad lumiso fursad aad kula sheekaysato luqadda Ruushka ee doqonnimadaada ah.
Sidaa darteed, waxaa aad u muhiim ah in la raaco qawaaniinta isgaarsiinta ee ku saabsan sheekaysiga fiidiyowga ruushka Ruushka.
Haddii tani ay tahay markii kuugu horreysay ee aad ku sheekaysatid luqadda Ruushka, waxaad bilaabi kartaa wadahadal aan caadi ahayn oo ku saabsan wax kasta oo adduunka ah.
Soo booqdayaasha qaarkood way adagtahay inay isla maraan meesha. Dadka noocaas ah badanaa waa luminayaan mana yaqaanaan sida loo sii wado wada hadalka, haddii qofka wax kala dhex gala uusan aamusin oo uusan sameynin iskudayo uu ku sii wado wada hadalka.
Laba ikhtiyaar ayaa suurtogal ah halkan:
Adiga oo ah hawl wadeen firfircoon oo firfircoon ayaa weydiiya su'aalaha hogaaminta ama soo jeedinaya mowduuc falanqeyn.
hada qofkaan damiya oo mid kale raadso
Nasiib wanaag, in chat video Ruush waxaa jira kun iyo hal siyaabood oo loo raadsado interlocutor cusub. Mabda 'ahaan, goobtu waa fiidiyaha fiidiyowga ah ee Ruushku ku hadlayo waxayna ku saleysan tahay raadin raadin lammaane isgaarsiinta ah.
Sidee loo Noqon Karaa Kusoo Dhawaanshaha Fiidiyowga Ruushka ee Ku-Dhawaanshaha
Many, adeegsadayaal aad u tiro badan oo ku hadla sheekooyinka fiidiyowga Ruushka ee ruushka ayaa weydiinaya su'aashan. Runtii, riyooyinku waxay qof walba u arkaan inuu yahay qof guuleystay. Guul laga gaaro wada sheekaysiga fiidiyowga, waxay ka dhigan tahay nin dhalinyaro ah oo firfircoon, firfircoon, kalsooni badan. Laakiin maxaa la sameeyaa hadaadan sidaa u bulsheed oo gabi ahaanba kalsooni qabin?
Falalka soo socdaa way caawin karaan:
Ka fikir intaadan ka hadlin waxa aad qof kale kula hadli doontid.
Ka fikir sidaad u bilaabi laheyd wada sheekeysi. Waxa ugu caansan waa in la yiraahdo "Hello! Sidee tahay?" Ha u maleynin in tani ay tahay jumlad habaabin qarniyo ah. Maya. Hadaad si xushmad leh u dhahdo wanaagna leh
wejiga weedhan, ka dib 85% wada hadalka ayaa sii socon doona.
labis sidii aad rabto. Tan micnaheedu maahan inaad gashan karto dharkaaga isla markaana aadan naftaada dhib u geysan haddii kale. Xannuunka qaawan ayaa dad badani ku qaldami karaan waxyaabo kicin kara xita oo aan xitaa la bilaabin wadahadal. Laakiin funaanada iyo jiiniska ayaa durba sababi doona naxariis darro waxaana jiri doonta fursad lagu sii wado wadahadalka. Haa, dhar adag oo ku saabsan sheekaysiga fiidiyowgu waa mid aan waxtar lahayn.
waxay kufiican tahay inaad timahaaga shanlayso. Kumaa doonaya inuu la hadlo qofka xariirka leh?
dhoola cadeyn. Qosol, laakiin ha qoslin. Haddii kale, waxay u maleynayaan inaad ku qosleyso qofka aad la hadlayso. Tanina waxay sababi kartaa rabitaan inaad riixdo batoonka "Next".
iyo guud ahaan, xusuusnow in waxkasta oo kujira sheekada fiidiyowga ay yihiin dad caadi ah, oo leh sheekooyin iyo aragtiyo u gaar ah. Dad aad u tiro badan ayaa isla markaaba la xiriiri doona.Way fiicnaan kartaa xitaa inaad qirato inaad halkan timid markii ugu horraysay.
Aynu markale xusuusino waxa aan ka fogaaneyno inta aan la sheekaysaneyno Ruushka Ruushka:
97,007Mahadal mowduucyada wada hadalka
97,007 qeybo jirka qaawan
Muuqashada muuqaalka halkii wejiga shay kale ka imaan lahaayeen
Oo aynu xasuusnaano waxa ay noqon karto inta lagu gudajiro nidaamka wada-xiriirka ee wada sheekaysiga fiidiyowga ee ruushka Ruushka:
97,007 shucuur wanaagsan
Si wada jir ah oggolaashaha wadahadalka
Haddii ay si lama filaan ah u dhacday inaad u tagtay wadahadalka fiidiyowga fiidiyowga ah ee ruushka, laakiin aad dhowr jeer isku beddeshay isku xigxiga, rajo dhigin. Waxay u egtahay inay dadku raadinayaan dad kale oo ay la hadlaan. Ha lumin oo sii wad raadinta xiriiriyahaaga. In ka yar shan daqiiqo, waa la heli doonaa. Hadal macaan oo macaan ayaa bilaabmi doona.